गौतम बुद्ध विमानस्थल कहिले सञ्चालन होला ?
२०७८ असार, १८
नेपालको एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान र यात्रुको चाप बढ्दै गएपछि यसको विकल्प खोजेको निकै भयो । सरकार निजगढ विमानस्थल निर्माणको सपना बाँडिरहेको छ तर निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम चाँडै सम्पन्न गरेर त्यसको सञ्चालनमा भने चासो देखाइरहेको छैन ।
सरकारकाले दाबीअनुसार त यतिबेला यो विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो । निर्माणको गति हेर्दा त्यो सम्भव पनि देखिएको थियो । तर, विमानस्थल निर्माण कार्य छिटो सक्न र उडान शुरू गर्न सरकार तातेको देखिँदैन । कोराना भाइरसको महामारीले यो विमानस्थल निर्माण प्रभावित हुनु सामान्य हो । केही काममा असर परेको पनि छ । त्यसले निर्माण सम्पन्न हुने अवधि धकेलिएको छ । तर, निर्माण सम्पन्न भएमा विमान स्थलको उपयोग कसरी गर्ने तथा सञ्चालनको मोडल के हुने भन्ने गृहकार्य गर्न ढिला भइसकेको छ । यसमा सरकारले देखाएको उदासीनताको परिणति विमानस्थल सञ्चालन केही वर्ष धकेलिन सक्छ ।
खसमा यतिबेला यहाँ परीक्षण उडान भइसक्नुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । सन् २०१५ बाट निर्माणको तयारी भएको उक्त विमानस्थलमा परीक्षण उडानको टुंगो नलाग्दा विमानस्थल सञ्चालनमा अन्योल भएकोे छ ।
विमानस्थलमा विमान उडान र अवतरणका साथै अन्य कार्य निर्देशित गर्ने धावनमार्ग, टावरलगायत क्षेत्रमा जडान भएका उपकरणले काम गरेका छन् या छैनन् भनेर परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि जहाज नै ल्याएर उडान अवतरण गर्दै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी काममा सरकारको तयारी देखिएको छैन । २०२० को शुरुआती चरणमा नै नियमित उडान सञ्चालनको तयारी भएको यस विमानस्थलको केही प्राविधिक कामबाहेक सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण सकिएको छ ।
परीक्षण उडानका लागि यसअघि भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिँदा परीक्षण उडान हुन नसकेको बताइन्छ । परीक्षण उडानका लागि आवश्यक पर्ने विशेष विमान ल्याउने सम्झौता भएको छ । तर, त्यसअनुसार विमान आउन सकेको छैन । अन्य देशबाट परीक्षण उडानका लागि आवश्यक पर्ने विमान ल्याउने तयारी भएको बताइए पनि ठोस परिणाम देखिएको छैन । पटक÷पटक उद्घाटनको मिति तोकिए पनि हालसम्म परीक्षण उडान हुन सकेको छैन ।
अर्बौं लगानीमा भएको विमानस्थल परीक्षण उडान छिटो गरी सञ्चालनमा ल्याए आपत्कालीन अवस्थामा यसको प्रयोग गर्न मिल्छ । कोरोनाका कारण विश्वभरिकै वायु सेवा प्रभावित भएकाले यहाँबाट तत्कालै नियमित उडानको सम्भावना देखिँदैन । तैपनि आपत्कालीन अवस्थामा यसको प्रयोग हुन सक्छ । आगामी आवका लागि बिस्तारै योजना बनाउन पनि परीक्षण उडान गरी यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
योजना आयोग किन आवश्यक ?[२०७८ सावन, १५]
शासकीय सोच[२०७८ सावन, १५]
विज्ञापनको बिगबिगी[२०७८ सावन, १५]
घट्ला बिजुलीको भाउ ?[२०७८ सावन, १४]
व्यवसायीलाई मन्त्री बनाउनै हुँदैन ?[२०७८ सावन, १४]